Earplusg Bandana Suppliers and Factory - China Earplusg Bandana Abakhiqizi
Ikhava Yobuso Besilisa Abesifazane Ihlobo Elengisiwe I-Tube Yesikhafu Isikhafu Ice Usilika Intamo Isigaxa Esiphefumulekayo I-Bandana
Iyahlambeka futhi iyasebenza futhi, lesi yisifihla-buso esenziwe ngezandla noma isikhafu sethubhu esaziwa nangokuthi imaski yokugoqa intamo / ibhande. Konke lokhu kwenziwa eChina futhi kungagqokwa ngezindlela eziningi ezahlukahlukene. Yigqoke njengesifihla-ski, i-neck gaiter, i-balaclava, ukumboza ubuso, i-headband, ukuvikelwa kwelanga, ngaphansi kwesigqoko sokuzivikela / isigqoko nokuningi! Indwangu yenziwe nge-95% polyester nge-5% spandex. Sidaya ngesandla futhi sizakhele izikhafu ngokwethu eGolden, CO naseGreater Denver Area. Yonke into ihlolwe kathathu ukuze kugcinwe ...
IBandana enendlebe yeluphu entanyeni eyindilinga i-balaclava yekhava yobuso yamadoda
ngokwezifiso i-Bandana enendlebe ye-loop entanyeni eyindilinga ebusweni
Idizayini entsha ye-polyester indlebe yokugoba intamo
ukotini wendlebe iluphu intamo gaiter design entsha
IBandana enendlebe yeluphu entanyeni eyindilinga ikhava yobuso inemibala